amin'ny Leslie Schnur
Last nohavaozina: ranomasina. 26 2020 | 10 min namaky
Nina maintsy hahita Daniel. Izy handeha haka ny omby araka ny tandrony, na mihoatra misongadina tsara, ny alika araka ny leashes, ary hahazo saina tanteraka, izy na dia tsy maintsy ho tanteraka ny tenany adala, izay, tena tokoa, tsy azo ihodivirana.
Ka dia nanomana alika manokana-mandeha hetsika. Amin'izao fotoana izao, fa tsy fampifangaroana azy io ny fomba matetika izy no, amin'ny alika isan-karazany, dia nanao fandaharana ny hihazona fotsy kely Yuppie-alika Fest. Dia naka azy juggling ny fandaharam-potoananao sy ny sasany amin'ny Suki finagling, alika iray hafa Walker fantany avy ny alikanay izay clientele alika toa ny cutesy, kely isan-karazany, ary izay nitrosa Nina hatramin'ny fahiny, rehefa nandeha tany Hawaii izy amin'ny minitra farany whim ary nangataka Nina mba mameno azy.
Nina tsy afaka milaza ny maha samy hafa ny alika ireo raha tsy nanana marika tsy mahazatra, tahaka ny tsy hita Stella sofina havia, na ny sola Jedi patch eo ankaviany ka nivika. To azy, izy rehetra fotsy kely alika, afa-tsy Cockapoos, izay tena ireo mahafatifaty sy marani-tsaina, fa inona koa no manantena avy mutts, izay no tena ireo Cockapoos. Pure niteraka alika fotsy kely mazàna no atao nanana ny adala izay mihevitra azy ireo ho toy mahafatifaty Accessories, satria kely ry zareo ary afaka hitondra azy ireo amin 'ny fiaramanidina, na hisakafo any amin'ny hotely. (Tsy, na izany aza, mitsara ireo izay nanana ny iray satria hypo-allergenic. Izany no antony ny fitsaboana, ny hany antony azo ekena ny hanana alika.)
Rangotra, ratra kely fa misy tompon'ny alika fotsy kely ary hahita psychotic ray aman-dreny, izay mino fa ny karazany sy tsy manam-paharoa dia manokana, ary nijoro ho anareo amin'ny maha samy hafa, tamin'ny an-tsipiriany, eo amin'ny Bichon sy ny Maltais, momba izay, mazava ho azy, Nina afaka manome ny diky.
Fa, maso miteny, tahaka ny entana, izy ireo ny fahitana. Dia efa nandray azy ireo ny fitahirizana, manantena izy ireo mihazakazaka Te ho Daniel. Fantany dia nihazakazaka isa-maraina sy marina ny fomba nandeha. Io maraina io izany Feno, na dia eo amin'ny lalana ny soavaly izay nampiasa ny alika. Ny olona rehetra nijery azy, mitsiky, manondro, amin'ny fahitana adorable. Sanatria izy fa mampiasa ny lalana mihazakazaka ho eny amin'ny fefy. Joggers ireo motherfuckers ratsy azy, raha ny alika, Baby strollers, mpandeha an-tongotra na seza misy kodiarana, ary tsy manana ny hery mba hiady amin'ny fa maraina, indrindra fa manao kapa vaovao mahafatifaty ireny izay namono azy.
Ary raha nanakaiky ny tionelina amin'ny tendron'ny ravin-atsimon'i fitahirizana, ny mahazatra nifofofofo avy alika avy ny maizina. Dia Sid. Oay Lele, nieritreritra Nina, araka izay atsy mahitsy ho azy, eto dia tonga. Fa izay nisy Sid, nisy Daniel. Ary ny fony nikapoka thumps zato faharoa, ary tsiky tampoka nahita ny fomba teo ny tarehiny, toy ny tànany niakatra nampalama ny volo, ary noravany ny lobaka, hamafa ny hatsembohana ny tavany izy.
Avy eo dia nahita azy. Ao amin'ny T-shirt sy ny kilaoty, volon-dohany toy ny vao nanakodia izy eo am-pandriana, mihazakazaka amin'ny headphones sy ny MP3 mpilalao tamin'ny ankaviany ho eo, ny an-tsaina mazava tsara momba ny mozika. Dia nihazakazaka nanatona azy tsy nahita azy.
Mandra-nanao. Ary avy eo, tsiky nipoaka manerana ny tavany, manao ny masony crinkle, amin'ny takolany dimple. Izy mafy ny malahelo. Voahodidina izy iraika ambin'ny folo fotsy kely alika, ny tsara fanahy ny olona mora entina sy coddle. Hitany fa toy ny mpilalao ody tsara any avaratra, manodidina bichons raha tokony ho munchkins. Ary izy manao zipo fohy tena fa tsy mahazatra azy kilaoty sy ny karazana kely namboariny peasanty blouse mahazatra azy fa tsy rovitra oniversite ny T-shirt sy ny andriamanitra kapa manambitana tsy mahazo aina fa tsy ny kiraro.
“Daniel!” dia nanofahofa azy.
Dia nitodi-doha mankany azy, satria amin'ny fotoana izay izy tsy mandeha na aiza na aiza. Alika kely ireo nihazakazaka ara-bakiteny ireo faribolana manodidina azy. Angamba Te ho lavo izy (Tsy nanantena izy fa ny haratra) ary dia tsy maintsy haka azy (fa izany dia tsy ho ratsy).
“Hey Nina.” Ary toy ny amin'ny sitrapony, dia tonga lehibe, efa ho hentitra. Raha tsy fantany tsara kokoa, izy dia efa nieritreritra izy pissed. No nahafantarany izy efa tao amin'ny trano any amin'ny toerana tsy tokony ho izy? Rehefa nanatona azy, dia nitondra ny headphones eny, famelana azy ireo mihantona ny vozony. Dia kitihina intsony ny MP3 mpilalao.
“Tahaka ny manodidina. Inona no anananao any, bichon folo misy sary sokitra?” Nanontany Daniel. Nitsiky izy, rehefa tonga tena akaiky azy araka izay azony natao, nomena hery ny manodidina.
“Mahafinaritra ahy. Fa raha ny marina, Atỳ iray bichon, ity iray ity eto, Star. Izany Zardoz, ny bichon / yorkie mifangaro, ny any peeing teo ambonin'ny vatolampy. Manana roa Chi-poos, Sam sy Dave, tsara teo amin'ny kely tsipìka mavokely, Vilia, ny cockapoo, Jackie O. ary John F., ny roa landihazo Tulears. Koa, Annie, ny Lhasa apso, ny alika amin'ny helo. Hainao ve fa? Izy dia manao ny doggie diaper raha ny ao an-trano. Tsy Mamazivazy. Ary ireo telo malteses? Izany Larry, Olioly sy Moe. Amboa yuppie Eleven ao amin'ny laharana rehetra.”
“Ahoana no ahafahanao milaza? Iza no iza, Ny tiako hambara. Izy rehetra samy hitady ahy.”
“Ianao doggist anao! Ary aza milaza ny tsara indrindra ësome namana are'Ö”
Nihomehy izy, rehefa nitazana. Ny toenails ireo dia nohosorany loko mainty ny reraka mavokely ary na ny tongony gnarly kely sy arched, dia nijery vehivavy malemilemy sy mahafinaritra azy raha oharina amin'ny fijery mahazatra ny biker-zazavavy-amin'ny-alika. Tsy izy antoka izay tiany mijery tsara kokoa.
Nina Taitra loatra sy faly, izy zara raha ahitana ny tenany. “Ianao nahatsikaritra. Ny tiako hambara–“
“Tsy misy T-shirt University.”
Dia niasa, Nina nieritreritra ny tenany. Nahatsapa ny kijanona teo amin'ny leashes. 'Mijanona rehetra. Mijanona fotsiny iray minitra, mba miangavy re.”
Nina nijery azy teo ny rantsan-tongotra avy eo indray ho amin'ny Daniel. “Misaotra anao. Toy izany ve ianao. I meanÖ”
“Saingy maintsy ho sarotra ny mandeha amin'ny kiraro ireo.” Nijery ny tongony eo amin 'ny strappy kapa, ary avy eo amin'ny tongony izy, ary avy eo niteraka tao an-masony. Izy efa nahita Azy, hahita azy, ary izy blushed.
“Tsara, Aho hahazo tsara kokoa ireo nandeha an-tongotra sy an-trano alika.” Tanteraka izy dia adala? Nahoana izy no mampahatsiahy azy ny ny asany? Ny tanjon'ny hetsika io dia ny hitondra azy ny fieritreretana azy fa tsy tahaka ny azy.
“Marina izany. Miasa ianao.”
Dia nitsoka izany. Ka dia Nisento ary lasa izy izany.
“Maka aho Sid ny taty aoriana, marina?”
Dia nihatokatoka. “Manana fivoriana. Izany, misaotra.”
“Antoka, izany ny asa.” Handoa anareo aho mba hamela ahy haka Sid.
Dia hoy Daniela, “Mahagaga fa ny olona toy ireny alika. Ry zareo mahafatifaty, fa tsy haka. Ry zareo toy ny manana saribakoly.”
“Eny, tsara, ny olona marary,” hoy Nina.
Nitraka izy ary nijery azy. “Izy ireo dia,” hoy izy:, toy ny masony squinted toy ny hoe miezaka hahita azy kokoa. “Dia mahadiso.”
Gaga izy. “Mitsidika,” hoy izy, hiaro tena ao.
“Oh manao izy ireo?” Dia nanangana ny volomaso, nieritreritra azy tao Mr. Chandler ny, ny anarany eo amin'ny solosaina.
“Handriany,” hoy Nina, nieritreritra ny antony, ny mpahay lalàna, ho fanadihadiana Mrs. Chandler eo amin'ny toerana voalohany.
“Izy ireo ny olona hanafika ny fiainana manokana.”
“Izay indrindra,” Nina Nanaiky.
Izy ireo maso tsirairay. Ny alika ireo mahazo matahotahotra. Annie i Sid sniffing ny vody sy Moe i Annie sniffing ny vody, fa Sid dia tsy liana amin'ny sniffing na iza na iza ny vody. Izy Te fotsiny ny helo lavitra ireo ratdogs fotsy kely haingana araka izay azo atao.
“Ianao mandeha tsara kokoa,” Nina hoy. “Sid tsy mitady faly loatra.”
Sid dia nitondra ny nify sy ny growling, ny hackles ny, ny rambony amin'ny standstill.
“Dia ny tsara. Hiara-mandeha amiko,” hoy Daniel. “Eo moa.”
“Eo moa!” Izy kosa anefa niziriziry.
Koa araka izany ny nandeha an-tongotra, manodidina ny fitahirizana folo mahery mbamin'ny alika, Daniel mihazona Sid tanana ny any ivelany.
“Teneno aho,” hoy izy:. “Nahoana no mandeha alika?”
“Fa nahoana no tsy? Inona no tokony hataoko? A tena asa? Izany ve no tianao lazaina?”
Dia tsy miraharaha ny defensivness. “Tsara, Efa hatramin'izay ve ianao no alika Walker?”
“Nahoana, zavatra tsy mety amin'ny maha-alika Walker?” Nahoana no mihevitra fa ny olona rehetra no mandeha alika izay ataonao raha tsy mahomby ny zavatra tianao ho manao.
“Aza, I”andehilahy te hahalala fotsiny. Moa ve tsy maninona?”
“Fotsiny nandritra ny herintaona. Miala tsiny. Ry namako, Clear, maintsy ho any L.A. vetivety ny, ka nalaiko ny ho azy, vetivety ny.
“Tsy mba toy izany mandalo, amin'ity taona ity asa maharitra. Aiza ianao no miasa eo anoloan'ny?”
“Nomenao azy ho amin'izany?”
“Tsy dia ho kivy. Afa-tsy ny reniko. Dia nobaboiny ny hirehareha amin'ny zo.”
“Mahatsiravina ianao vavy.”
Tsy maintsy mijery azy mba hahafantarana raha izy Mamazivazy na tsia. Izy no. Nitsiky izy.
“Tsy maintsy manao tsara ny sasany vola. Mieritreritra ny zavatra mandoa anao, sy mihabetsaha fa amin'ny fomba maro? Ao ve ianao maro ny alika, marina? Ary ny vola rehetra, marina?”
“Izaho manao ekena.”
“An vola rehetra raharaha. Izany dia zavatra tsy tokony ho tsy misy taxpayer.”
“Ary ahoana ny aminao? Ianao ny ranoka volkano–?” Niezaka izy intsony ny tenany saingy tara loatra.
Ny masony slits lasa maivam-boa dia nitsiky. “Afaka milaza izany. Tsy misy teny ratsy. Avereno aoriako: mpisolo vava. Eo moa.”
“Mpisolo Vava,” hoy izy dia samy nihomehy.
“How'd fantatrao?” dia nanontany, aza, fantany tsara ny fomba fantany.
“Tsara, ny, I, hiheveranao azy fotsiny. Ianao dia toa ny mpahay lalàna. Sid dia ny karazana alika mpisolovava hanana. Ny trano, tsara, avy tamin 'Nahita izany, toa ny karazana toerana izay mpisolovava ho velona.”
“Araka ny zavatra efa hitanay dia ny mifanaraka fepetra izany didim-pitsarana.”
'Donët manadino ny trano fidiovana, ary ny–“
“Izay izany! Tsy nahita–“
“Ny lalantsara amin'ny Foyer any amin'ny trano fidiovana, Enga anie ianao sy ny efitrano fatoriana maintsy mandeha amin 'ny alalan mba ho any amin'ny efitra fandroana.”
Tsy maintsy nijanona izy azy. To hamily azy. “Eny, dia ny koveta be fandroana, fandroana sy kabine. Maty izy ireo giveaways. Hoy izy ireo: mpisolovava’ manerana azy.” Nihomehy izy indray. “Efa adinoko ny efitra fandroana.”
“Hmmm. Tsy ahy,” hoy izy mitsiky.
Ankehitriny ny lafiny atsinanana, ary akaiky ny anjara any andrefana, amim-pifaliana ny alika an-dalana an-trano, Nina ary Daniela efa latsaka ao an-tongotra Groove. Dia minitra talohan'ny azy na niteny.
“Ary ny trombone,” hoy Daniel.
“My trombone, Hoy aho.”
Nina ny afaka nahatsapa tao am-pony tahaka ny amponga nikapoka ao amin'ny Jazz quartet. “Ianao, ny, milalao trombone?”
Nijery azy vetivety, ka nanao hoe: na inona na inona. Avy eo dia, araka izay toa toy ny ora, dia nanontany, “Tianao Jazz?” Nanontany Daniel.
“Antoka, eny. Angamba.” Efa am-pony amin'ny fandriky ny basse. Izy na handeha hanontany azy avy, na hahita azy avy.
“Ny hevitrao ianao te hiaraka amiko hihaino solafaka ny Hampton? Dia ny amin'ny Vanguard sy milalao mafy trombone. Tianao trombone, sa tsia.”
Tsy nanontany azy ho toy ny fanontaniana, ka dia tsy namaly. “Tsy noeritreretiko mihitsy nisy kintana trombonists Jazz.”
“Misy trombonists fa miavaka, tsy misy kintana. Trompetra, saxes, mazava ho azy, fa tsy mbola nahazo trombones ireo noho. Ny trombone no odian-tsy hita tandroka. Antoka, Zavatra tandroka manana mozika kilasika, tubas manana mandeha fatorana, ary mazava ho azy trompetra sy saxes na aiza na aiza, ny fotoana rehetra. Fa ny trombone? Dia ny adino tandroka, ny mangina, soulful, rahalahy ara-panahy ny anjomara.”
Izy noho ny fitiavany mesmerized.
“Izany, te-handeha handre iray? Raha ny marina dimy? Hampton ny atambatra ny trombone quintet. Izany dia midika hoe ho lasa zavatra. Ary nihevitra aho fa nisy toy izany ianao satria liana, tsara, dia mety ho tianao ho avy.”
“Tsara, Eny, azo antoka, fa, Aho aho hoe tsy tena haveÖ”
“Anio alina?” Nieritreritra izy iray minitra sy nahatsiaro zavatra. Dia namely ny tenany teo amin'ny valahana. “Aw, aza, Tsy afaka aho anio hariva.” Claire tamy ny, ary hanafoana ny tsy izy azafady namana ho an'ny lehilahy. Na bandy ity.
“Okay, ahoana ny amin'ny ampitso? Ho manodidina izy ireo andro vitsivitsy. Ny voalohany dia amin'ny sivy. Afaka mihinana aloha.”
Andriamanitra ô. Ô jeez. Eny e!! Vao ny masoandro nitsangana ny Eny ambony hazo ary afaka mahatsapa ny hafanana teo amin'ny endriny. Ny alika dia faly sniffing ny rivotra madio, ary raha maraina dia tsy fantany tsara kokoa, izany no fiainana! Izany dia tonga lafatra tanteraka maraina. Jereo! Jereo! Ny fiainana mitodika indray mipy.
“Tsara,” dia ny hany hoe.
Efa tonga ny atsinanana.
“Dia fa 'tsara, eny '?”
“Tsara, okay,” izy namaly articulately.
“Maka aho fa ho eny. No naka anao?”
Tsy maintsy nieritreritra mafy, ka te tsy ny mahazatra 'daty’ fomba izay teo ny oroka, ka hiteny, ny fahafatesana. “Afaka mahafantatra anao any aho?”
“Antoka, fantatrao izay dia? Fahafito sy ambin'ny folo, lafiny avaratra, toerana kely. Fito-telo-polo ekena?”
“fahafito ambin'ny folo sy ny?” Flushed amin'ny menatra izy amin'ny tsy nahalala ny tanàna.
“Fahafito Avenue sy ambin'ny folo Street.” Nitsiky izy.
Nihatokatoka izy mba hampiseho azy izy nanaraka. “Amin'ny fito amby telo-polo,” izy namerina, amin'ny iray faly, mahatahotra, sahiran-tsaina domelina.
“Good. Izao vao handeha aho. Ny sasany amintsika niasa tamin'ny tompon-velona, fantatrao.” Nitsiky izy, ny hanihany. “Sangisangy izany!” Dia nanendry ny forearm amin'ny tànany. “Rahampitso indray, marina? Ny alina ny trombones.”
Dia nanendry ny toerana dia vao nikasika, ka nanao hoe:, “Eny.” Efa lasa daty-o-adala, ny daty-a-phobe, daty fanamby. Efa nametraka ny daty tamin'i Daniela momba ny avo indrindra fantatry ny olombelona pedestal, Efa ho avo toy ny Tendrombohitra Everest, ary sarotra ny fofonaina ny manify ny rivotra any. Mety ho ny fiainana na dia nandrahona. Dingana iray, nijangajanga, ary azonao atao ny mitady ny tenanao mianjera. Amim-pitiavana sy / na ny fahafatesana.
Ary nitodika tamin'i Sid afovoan-tanànan'i ary nanomboka nihazakazaka ary haingana avy amin'ny fahitana. Fa nanam-potoana Nina ampy hiverina, ary mijery ny tenany mihetsiketsika ao ny kilaoty, ny hozatra tongony sy ny sorony, ary hitondra ny fofonaina ary dia nahofany, famaranana ny masony, nahita azy mitana azy sy nanoroka azy ary N
Fa ny fotsy doggie Battalion niverina nanala ny fahatsiarovan-tena amin 'ny heriny rehetra, ary izy ireo teny an-dalana hody.
Dia nihazakazaka tahaka ny rivotra, toy ny hoe tsy efa mihazakazaka ny dimy kilaometatra. Nahatsiaro ho avo, na dia zara raha fantany ny zavatra tena nahatsiravina toy ny, dia efa tany amin'ny oniversite satria nihinana. Ary izy dia nitsapa faly, na dia zara raha fantany ny zavatra tena nahatsiravina toy ny, dia efa toy izany ela izy, dia aoka ny tenany satria mahatsapa. Ary izy no vehivavy hafa firenena ho toy izany, Billy nieritreritra. Kanefa mahatalanjona, misy fotsy ireo alika. Zavatra momba azy, ny tanana mahery, mahafinaritra ny maso, ny vava azy, ny tsy nampoizina marefo, ny fisokafana, zavatra Nandondòna azy. Ô zazalahy, Tsy nitranga izany, dia izany? Tsy amin'izao fotoana izao, tsy araka ny Daniela, tsy amin'ny nutty io zazavavy izay kosa ilay Peeping Tom sy ny hetra evader, ny fanombohana. Izy na handeha ho raiki-pitia taminy, na tsy maintsy hisambotra azy na izy roa. Ary ny andro farany izay lavo amin'ny fitiavana happenedóthe zavatra, tsy ny fisamborana thingóit nifarana rehetra tena ratsy. Ary izany dia toy ny tenany. Andraso mandra-mianatra, Mahazo izany raha lavitra, izay izy no tena sy ny zavatra tena ataony. Ny mpisolovava ny ratsy ampy. Fa ny IRS mpitsikilo? Fantany avy tamin'ny zavatra niainany hoe tsara ny mamantatra mialoha dia zavatra iray izay vehivavy afaka nizatra ny, fa rehefa gaga tamin'ny dia zavatra iray izay mety tsy hahazo ny.
Angamba izy nandeha niaraka taminy, saingy mihevitra fa ny Daniel! dia nanontany tena. Ny Daniela ao amin'ny sary, amin'ny slick trano, alika tonga lafatra?
Ary inona no fantany Daniel mpahay lalàna, ihany? Angamba fa bigmouth doorman Pete Nilaza taminy. Fa raha tsy efa namaky ny sasany ny tatitra na ny mail na ny zavatra maro ao amin'ny trano izay efa nomena azy izy. Zavatra tsara izy ka tsara ny nanafina ny tena asany sy ny maha-. Dia efa ao amin'ny efi-tranonao. Efa nanokatra ny raharaha trombone. Efa mitsoka ho mpitondra teniny. Efa nandro tao ny tub. Izay nahafantatra ny Nina io no mahavita? Moa ve izy tsy manana fetra?
Rehetra dia fantany fa amin'ny manaraka, dia te-ho amin'izany koveta be fandroana taminy.
Tamin'ny fotoana Nina nandeha an-tongotra ny alika, ary avy eo nahazo azy ireo an-trano, tongony no mandeha rà avy amin'ny fito amin'ny toerana samy hafa. Telo teo amin'ny tongony ankavanana, ary efatra teo amin'ny ankaviany. Dia nipetraka teo an-tsisin'ny fandriany, nieritreritra izay iray izy adala, raha ny fampiharana sy ny tarika peroxide hidrozenina fitaovana, araka ny Sam dutifully nilelafan'ny ny bottoms ny tongony. Eny Daniel efa nahatsikaritra heróyou'd no ho Helen Keller tsy toóbut fantany momba ny fandroana. Fantany momba ny trombone.
Fa efa nanontany azy raha ny marina avy. Ary efa nanao izay mitranga. Ankehitriny aza mitsoka izany, hoy izy raha toa izy ireo manakiana ny reniko, manondro ny daty, tsy ny trombone.
Dia naka bahana amin'ny, miezaka ny hahatsiaro fa t-shirt tao amin'ny efi-tranonao sy ny musky fofony.